नेपालको १२ औ जनणनाको विश्वसनीयतामै प्रश्न,वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ या हुदैन? - Kanchan Aawaz
Kanchan Aaawaj२०७८ मंसिर ८, बुधबार १७:१४ गते
८ मङ्सिर २०७८
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘गणकलाई धाक धम्की दिएर विवरण टिपाउन लगाइएको छ । कतिपय ठाउँमा गणक फर्काइएको छ । पुनः दोहोर्‍याएर गणना लिन भनिएको छ। अहिलेका जनगणनामा स्वार्थ समूहका कारण यथार्थ विवरण नआउला कि भन्ने चिन्ता पैदा गरेको छ,’ उनले देशसञ्चारसँग भने।ती समूहले दबाब नै दिन आएपछि विभागले विज्ञप्ति जारी भयो। गणकप्रति अविश्वास तथा आशंका प्रकट गर्दै केही व्यक्ति वा संस्थाहरुले उत्तरदातालाई आफ्नो संस्थागत निर्णय अनुरुप उत्तर दिन लिखित वक्तव्य गरिएकाले विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी संस्थागत निर्णय अनुरुपको उत्तदारदातालाई दिन अभिप्रेरित गर्नाले सही तथ्यांक संकलन गर्न बाधा पर्ने देखिएको जनाएको छ । उसले तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उपयुक्त समाधान खोजी गर्न र जनगणना निर्देशका २०७७ को पालना गर्न गराउन गणक सुपरिवेक्षक र कर्मचारीलाई विभागले विज्ञप्तिमार्फत् आह्वान गर्‍यो।
दुईदिन अगाडि मात्रै पनि आम जनतामा विभागले विवरण निष्पक्ष भई लेखाउन सार्वजनिक अपिल नै गर्‍यो। कसैको दबाब, प्रभाव, लालच, डरधम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा सबैले सही विवरण लेखाउन यस्तो अपिल गर्‍यो। (हेर्नुहोस् अपिल।)
जनसंख्याविद् डा. यज्ञबहादुर कार्कीले पनि यसरी तथ्यांक लिने र टिपाउने विषय जनगणनामा पाच्य नहुने बताउँछन्। ‘कसैले प्रेसर दिएर यो टिपाउने विषय होइन । विशुद्ध बैज्ञानिक हिसावलले लिने हो । दवाव र प्रभावमा पार्ने कामले तथ्यांक गोलमोटलमा आउन सक्छ । विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ,’ डा. कार्कीले भने। केन्दीय तथ्यांक विभागका पूर्व महानिर्देशक विकास विष्टले सामुदायिक रुपमा आह्वान गरेरै यो यो टिपाउने भन्ने निर्देशन विभिन्न समूह र वर्गमा भएको र यसमा ठीक नियत नदेखिएको बताए। ‘यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गरेको छ । कसैलाई यो टिपाऊ भनेर बाध्य पार्न पाइँदैन,’ उनले भने।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले राजनीतिक वा अन्य संयन्त्रले व्यक्तिको भाषा, जातजस्ता विषयमा निर्णय गर्न नपाउने र कसैले तोकिदिने आफैमा आश्चर्यको विषय भएको बताए।
खै जात र भाषिक सर्वेक्षण?
जनगणनामा जात र भाषिक सर्वेक्षणबाट उपलब्ध हुने नतिजा जस्तो अपेक्षा गर्न थालेपछि थप समस्या पैदा भएको छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनामा भाषिक तस्बिर यथार्थ रुपमा आउन सकेन । एउटा जातभित्र पनि दर्जनौँ भाषाहरु रहेकाले त्यसको प्रतिनिधित्व जनगणनाले गर्न सकेन । मातृभाषाको सही तथ्यांक नहुनुमा आफैँ आफ्नो भाषा नबोले पनि पहिचानका लागि मात्रै भाषा टिपाइयो । संख्यामा बढी देखिएपनि ती भाषा अहिले वक्ता संख्या कम भएकाले लोपोन्मुख र संकटमा परेका छन् ।
‘पहिचानका लागि धेरै जातिले आफ्नो जातिगत भाषा टिपाए । त्यसैले बोल्ने वक्ता र वास्तविक संख्या अहिले फरक छ,’ आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले भने।
पुस्तादेखि बोलिने भाषा कति चलनचल्तीमा छन् भन्ने कुरा सरकारी निकायझैँ आममानिस पनि बेखबर छन्।
नेपालमा २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार नेवार छैटौँ भाषा र मगर सातौँ भाषा हो।
यस अगाडिका सबै जनगणनामा उल्लेख भएका सबै भाषा मातृभाषा र केही जातिगत भाषाको रुपमा मात्रै दर्ज भएका छन्। ‘यस्तो संख्याले चलनचल्तीको भाषिक स्थिति बताउन सकेन। आवश्यक नीति पनि बन्न सकेन,’ भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले भने। प्रदेशगत भाषाहरु सिफारिसमा पनि अहिले समस्या देखिएको छ।
‘भाषा र जातजातिका बारेमा धेरै तत्लो तहसम्म जाने हो भने राज्यको समय स्रोत मात्रै खर्च हुन्छ र झन्झटिलो हुन्छ,’ अहिले ८० वटा प्रश्नावली छ । त्यसले गुणात्मकता कायम गर्न गाह्रो पर्ने जनसंख्याविद् डा. कार्कीले बताए।
परम्परागत रुपमा गरिँदै आएको जनगणनामा अझ पनि सुधार भएको छैन । ६ हजार ६ सय ८० वटा वडाहरुमा जन्म, मृत्यु बसाइँसराइ र विवाहजस्ता दैनिक अभिलेख राखिन्छ । त्यो तथ्यांक विभागले उपयोग गर्दैन । कम्युटरको सिस्टममा राखेर केन्द्रसम्म ती सूचना आउन नसक्ने संयन्त्र नबन्दा अहिले जनगणनाकै भर पर्नु परेको छ । भाइटल स्टाटिस्टिक नै केन्द्रसम्म नआउने कारण जनगणना गर्नु परेको हो । यस्ता तथ्यांक अध्यावधिक सिस्टम भएका देशमा जनगणना नै नहुने जनसंख्याविद् डा. कार्की बताउँछन् । ‘जनगणनामा ती सूचनाहरु उपयोग गर्न सकिन्छ । तर भाइटल स्टाटिस्टिकका लागि वडाहरुको रेकर्डलाई उपयोग नै नहुँदा व्यक्ति दोहोरिने वा छुट्ने अवस्थाले जनणनाको गुणात्मक र विश्वसनीयतामा असर पर्दछ,’ डा. कार्कीले भने।
अन्य देशमा भाषा र धर्मका कुरा जनगणनामा प्राय गणना गरिँदैन । तर नेपालमा १९८१ पछि भाषा र धर्मको पनि विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको छ । ‘हरेक कुरा जनगणनामा हाल्दा त्यसको मर्म भावना र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्दछ,’ डा. कार्कीले भने । सरकारले जनगणना कार्यलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहे पनि विश्वसनीयता तथा गुणस्तर सुधार्ने काम गरेको छैन ।